အကောင်းဆုံး Virtual Reality Apps ကပ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » 2019 များအတွက်အကောင်းဆုံး Virtual Reality Apps ကပ Now ကို Download လုပ်ပါ
2019 Now ကို Download လုပ်ပါ APK ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံး Virtual Reality Apps ကပ
virtual reality ငါတို့ရှိသမျှသည်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့အဲဒီအခြိနျကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကတုန်းပဲတော်တော်လေးအသစ်နှင့်ယင်း၏ရင့်ကျက်ရောက်ရှိမဖြစ်စေခြင်းငှါနေစဉ်, စျေးကွက် VR ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်နှင့် Google, Samsung နှင့် Facebook တို့ကဲ့သို့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ Android အတွက် VR နားကြပ်တွေအများကြီးကုန်ကျပါဘူးနှင့်အချိန်နှင့်တကွ, VR apps များပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီနေကြသည်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? 2019 များအတွက်အကောင်းဆုံး virtual reality apps များအချို့ကိုကြည့်ကြရအောင်။
Google ကနှစ်ခုအကောင်းဆုံး virtual reality apps များရှိပြီး Google က Cardboard သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Cardboard VR နားကြပ်ကို set up နှင့် VR စွမ်းရည်တစ်ဦးက high-level ကိုလှည့်လည်ခံယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဝန် VR ဗီဒီယိုများ, Cardboard-supported apps များနှင့်အမြင် 3D ဆန္ဒပြပွဲများဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
Google က Cardboard သင် VR apps များနှင့်အတူ tool ကိုလှည့်ပတ်ချင်လျှင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့အဖြစ်ကောင်းစွာဒီမှာ DIY ကြိုးစားမှုရှိခဲ့ပွီ!
YouTube ကို VR
YouTube ကို VR က၎င်း၏အသစ်သောစွမ်းရည်များနှင့်အတူခြေလှမ်းနောက်ထပ်အကြောင်းအရာကြည့်အတွေ့အကြုံကိုယူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Android အတွက်အဆိုပါ VR ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများသည်သင်၏အတွေ့အကြုံကတိုးမြှင့်, VR mode မှာဗီဒီယိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြု, VR ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါဟာအားလုံးထိပ်က Android-supported VR နားကြပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့စိတျထဲမှာ Google ကဒေးဒရင်းမ်နှင့် Google Cardboard စောင့်ရှောက်ခြင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
Netflix နဲ့ VR
သငျသညျ Netflix, သင့်အကြိုက်ဆုံး streamer လည်း VR ထောက်ခံပါတယ်နှင့်ယခုဒီတော့အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာအဘို့ပြုတော်မူကြောင်းကို? သိပါသလား တကယ်တော့သူက Android အတွက် VR ချမှတ်ရန်ပထမဦးဆုံးသူမြားအကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Netflix နဲ့ VR app ကိုအသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောနေ့ခင်းအိပ်မက်, Cardboard နှင့် Oculus အဖြစ်အဓိက VR နားကြပ်ကိုအသုံးပြုအကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
သငျသညျအနညျးငယျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးရန်, နှစ်ဦးကိုကြည့်ရှုသည် Modes ကဒီမှာရှိတယ် - သင်တို့ရှိသမျှသည်သင့်မီဒီယာ၏အမြင်နှင့် content ထဲကိုသင်သည်ဗတ္တိဇံဒုတိယပေးခြင်းတစ်ဦးဧည့်ခန်း၏ပထမဦးဆုံးတဦးတည်း။ အဘယ်သူမျှမ VR-တိကျတဲ့အကြောင်းအရာယခုအထိရှိစဉ်အခါ, သင် VR အတွက်အခြားအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 3D ကဒီမှာမပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်မှတ်သားပါနဲ့။ ဒါဟာ VR ပိုပြီးဘုံဖြစ်လာတခါ, Netflix ဟာသူ့ရဲ့ catalog မှ VR-တိကျတဲ့အကြောင်းအရာ add လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Google ကနေ့ခင်းအိပ်မက် Google ထံမှအခြားအရာရှိတဦးက VR App ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Cardboard ပိုမိုမြင့်မားသောသတ်မှတ်ချက်များ features များနှင့်တစ်အများကြီးပိုကောင်းထုတ်ကုန်စုစုပေါင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်, ကောင်းစွာပြု၏ပြီးနောက်ဒါဟာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးစွဲဖို့, သင်ကနေ့ခင်းအိပ်မက်-နိုင်စွမ်းစမတ်ဖုန်းများနှင့်တစ်ဦးနေ့ခင်းအိပ်မက်ကြည့်ရန်နားကြပ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီ app အားလုံး VR အကြောင်းအရာတစ်ခုပလက်ဖောင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သငျသညျ VR vides, သင်၏နားကြပ်များအတွက် setting များနှင့်အခြားနေ့ခင်းအိပ်မက်-supported app များကိုဖြတ်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တဖန် Google က, လေ့လာရေးအဖှဲ့ app ကိုကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းဆရာများများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကလုံးဝနီးပါးကမ္ဘာတဝှမ်းအထင်ကရအဆောက်အစူးစမ်းဖို့ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ app ကိုအသုံးပြုသူများသည်အခြားဟက်ဖို့ခရီးစဉ်ဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုကတည်းကကြောင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးအုပ်စုငယ်နှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိနိုင် 900 ကျော်ခရီးစဉ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများဒီဘယ်တော့မှယာနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အခြားနားကြပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်အထူးသက Google Cardboard သို့မဟုတ်နေ့ခင်းအိပ်မက်နားကြပ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
New York Times ကို VR
The New York Times VR app ကိုယခုသတင်းကိုကြည့်နေတဲ့ပျော်စရာလမ်းက၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်တတ်၏။ ဒီ app အသစ်သောအကြောင်းအရာဗီဒီယိုများနှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်း update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုများနှင့်နိုင်ငံရေးကနေရာသီဥတုနှင့်ဖက်ရှင်ရန်, သင်ဒီမှာအရာအားလုံးကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကန့်သတ်ဒေတာရှိပါကသင်သည် app ရဲ့ download, အင်္ဂါရပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာသွားလာရင်းအသုံးပြုရန်စုံလင်သည်။ The New York Times VR နှင့်အတူ, သငျသညျနားကြပ်ခြင်းမရှိဘဲ 360 ဗီဒီယိုများ play နိုင်ပါလိမ့်မည်။
FullDive ဓါတ်ပုံသိုလှောင်ခြင်းမှက web browsing အတွက်ခွင့်ပြုမှအရာအားလုံးကိုရှိပါတယ်တဲ့ VR ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင် Fulldive VR မှတဆင့် install နိုငျကွောငျး VR-supported apps များရာပေါင်းများစွာ၏ပါဝင်သောသင့်ကိုယ်ပိုင် VR စတိုးဆိုင်ပေးလိမ့်မည်။ app ကိုအတွက် VR ကင်မရာကျေးဇူးတင်ပါသည်, သငျသညျမြားကိုလညျး 360 ဒီဂရီဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူများလည်း YouTube ဗီဒီယို၏သန်းပေါင်းများစွာသောမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ app နေ့ခင်းအိပ်မက်, Cardboard နှင့် Oculus ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်ပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်က Android-နိုင်စွမ်းနားကြပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
VR ဂိမ်း, လူကြိုက်များနေဆဲခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာမမူသော်လည်း။ InCell VR ပြဇာတ်သို့ကြွလာနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဒါဟာလူ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုသူတို့ကိုသင်ပေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သားသမီးတို့အဘို့တခုပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းကစားသူတစ်ဦးကလူ့နောက်ခံလူဖြစ်လာရှိရာ 2100s အတွက်သတ်မှတ်ထားသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း fit မှအရွယ်အစားကိုဆင်းကျုံ့။ ပိုးမွှားများနှင့်ဘက်တီးရီးယားချွတ်တိုက်ခိုက်နေနှင့်အချို့သောအခြေခံလူ့ဇီဝဗေဒသင်ယူနေစဉ်ကစားသမားအခြေခံအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သွားရောက်ကာ။
၎င်း၏ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်သံကိုသက်ရောက်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ က hard စာအုပ်များနှင့်စာသားများကနေလေ့လာဖို့ရှာတွေ့သောသူကလေးများအသိပညာလေ့လာရဖို့ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ သင် VR လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမရှိဘဲအသုံးပြုလိုလျှင်, သင်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ညှိုးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့် non-VR mode ကိုပြောင်းနိုင်ပါသည်။ InCell VR တဦးတည်းအံ့သြဖွယ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေရဲ့ပဒေသာအဖြစ်ကောင်းစွာဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ်။
ဒါကအနာဂတ်အာကာသတိုက်ပွဲဂိမ်း - VR အပေါ်လုံးဝကစားခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ အဆိုပါပုံရိပ်ယောင်များအံ့မခန်းဖြစ်ကြပြီးအသံသက်ရောက်မှုဂရပ်ဖစ်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ Minos Starfighter VR ကိုအကောင်းဆုံးစွဲငြိဖွယ်ရာ VR Cardboard အဲဒီမှာအထဲက apps တစ်ခုဖြစ်တယ်နဲ့တူအတူတကွပြုလုပ်ကြည့်ပါတယ်။
အဆိုပါကစားသမားအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအာကာသ enviroments မှာဂြိုလ်သားရန်သူနှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်တစ်ဦးအာကာသတိုက်လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးဖြစ်လိမ့်မည်။
VR စိတ်လှုပ်ရှားစရာ: ကြိတ်စက် Coaster 360
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုထားသကဲ့သို့, ဒီဂိမ်းညာဘက်သင့်ရဲ့အိပ်ရာဖို့, သင်အကောင်းဆုံးအစဉ်အဆက် VR roller Coaster အတွေ့အကြုံကို၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာအန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး VR ဂိမ်းထဲကတစ်ခုဖြစ်လူသိများသည်နှင့် 10 သန်းတပ်ဆင်အပေါ်မှာထင်ရှားခဲ့သည်!
တစ်ဦး Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသော 360 ဗီဒီယို, သင်ကအစစ်အမှန်ဘဝ roller Coaster ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးနားကြပ်မသုံးဘဲကြောင့်ကစားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာ Google က Cardboard များအတွက် optimized နှင့်အတွေ့အကြုံအဆုံးစွန်နှင့်အတူသိသိသာသာပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး Virtual Reality Apps ကပ အကောင်းဆုံး Virtual Reality Apps ကပက Android အကောင်းဆုံး VR Android App များ